Pano THEMAX inokuzivisa nzira dzinoverengeka dzakabatana dzemabhanhire ekuendesa erabhora Bhandi rekutakura rinofanira kunge rakabatanidzwa mune chiuno risati rashandiswa. Naizvozvo, mhando yeanotakura bhandi mubatanidzwa inokanganisa zvakananga hupenyu hwebasa reanotakura bhandi uye kumeso kushanda kwetambo yekufambisa. Kazhinji nzira dzinoshandiswa pakufambisa mabhandi ebhandi dzinosanganisira majoini emuchina, majoini akasungwa akasungwa uye majoini anopisa.
I.Conveyor bhandi zvemishini majoini nzira:
Kazhinji zvinoreva kushandiswa kwebhandi mabhandi majoini. Iyi yekubatana nzira iri nyore uye ine hupfumi, asi kugona kwejojo ​​kwakadzikira uye kuri nyore kukuvadza, uko kune chakakanganisa hupenyu hwebasa hweanotakura mabhandi zvigadzirwa. Mune PVC nePVG yakazara yepakati murazvo-inodzora antistatic conveyor bhandi majoini, kazhinji zvigadzirwa zviri pazasi giredhi 8 mabhandi anoshandisa iyi yekubatana nzira.
II.Conveyor bhandi inotonhora kubatana ...
Zvinoreva kuti inoshandiswa kutonhorera kubatanidza kunamatira kwemajoini. Iyi yekubatanidza nzira inoshanda zvakanyanya uye ine hupfumi pane michina majoini, uye inofanirwa kuve neiri nani mubatanidzwa mhedzisiro. Nekudaro, kubva pane inoshanda maonero, nekuti maitiro mamiriro acho akaomesesa kugona, uye mhando yeinamatira ine simba rakakura pakubatana. Saka haina kunyatsogadzikana.
III.Conveyor bhandi chafariz vulcanization majoini nzira:
Kudzidzira kwakaratidza kuve yakanaka yekubatana nzira, iyo inogona kuve nechokwadi chepamusoro chekubatana kushanda, uye zvakare yakagadzikana kwazvo. Hupenyu hwebasa rejoinhi hwakareba zvakarereka uye zvakareruka kugona. Nekudaro, pane zvakakanganisika senge nzira inonetsa, kudhura uye nguva yakareba yekupora, nezvimwe.
Mune irabha yekuendesa bhandi indasitiri, bhandi kupurudzira inogara iri hombe musoro uye dambudziko gadziri. Asi kuburikidza nekushanda nesimba mukutsvaga uye kusimudzira, THEMAX tsvaga yakanaka chigadzirwa mhinduro yacho. Ikozvino THEMAX ramba uchibatsira vari mukati kugadzirisa dambudziko rekubatana uye kupora.